फेरी लागु हुने भयो यस्तो नयाँ नियम, कहिलेदेखि हुन्छ सुरु ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोभिड–१९ लाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चाडबाड विशेष सुरक्षा योजना बनाई लागू गर्न उपत्यका, प्रदेश र मातहतका जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
रूपन्देहीका दुईसहित थप ६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
रूपन्देहीका दुईसहित थप ६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । रूपन्देहीका दुई, बाँके, दाङ, चितवन र ललितपुरमा एक/एक जनाको मृत्यु भएको हो । बुटवल–१० का ७९ वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान ७:१५ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए ।
रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिका–६ का ५७ वर्षीय पुरुषको कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको छ । असोज १९ गते कोरोना पुष्टि भएपछि उनको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार थालिएकोमा शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो ।
कोहलपुर नगरपालिका-९ पिपराका ३८ वर्षीय पुरूषको पनि शुक्रबार राति ११ बजे भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यही असोज १३ गते कोहलपुर मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका संक्रमित ती पुरूषलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेपछि शुक्रबार राति १० भेरी अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । भेरी अस्पताल पुर्‍याइएको १ घण्टाभित्रै उनको मृत्यु भएको श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै दाङको घोराही उपमहानगरपालिका- ३ का १५ वर्षीय किशोरको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । दाङको घोराहीबाट उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा भर्ना भएका १५ वर्षीय किशोरको उपचारका क्रममा शुक्रबार राति करिब नौ बजेतिर मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।
योसहित बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन हुनेको सङ्ख्या २४ पुगेको छ भने बाहिरी जिल्लाबाट उपचारको क्रममा बाँकेमा आई मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १२ पुगेको छ । होम आइसोलेसनमा रहेका चितवनका एक वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–२० माइली चोकका ६७ वर्षीय पुरुष रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार उनको शुक्रबार राति ९ बजे मृत्यु भएको हो ।
क्यान्सरका बिरामी उनको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा असोज २१ गते स्वाब परीक्षणका लागि दिइएकोमा २३ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ललितपुरमा पनि एक कोरोना संक्रमित पुरूषको मृत्यु भएको छ । ललितपुरकै गोदावरी-९, छम्पीका ४६ वर्षीय पुरूषको मेडिसिटी अस्पतालमा शुक्रबार राति ८ बजे मृत्यु भएको हो ।